Qaabka Aan U Akhrino Shaqada Emailka Waa Isbedelay | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 16, 2017 Isniin, Oktoobar 16, 2017 Douglas Karr
Adduunyada e-mayl ka badan la soo diro weligood (illaa 53% laga bilaabo 2014), fahamka noocyada fariimaha la diro, iyo marka farriimahaas la diro labadaba waa waxtar iyo muhiim. Sida inbadan oo idinka mid ah, sanduuqa sanduuqa ayaa xakameyntiisa ka baxsan. Markii aan wax ka akhriyey sanduuqa eber, Kama caawin karo laakiin waxaan ka yara rajo xumaanayaa mugga iyo qaabka emayllada looga jawaabo.
Xaqiiqdii, hadaanay ahayn SaneBox iyo MailButler (adoo adeegsanaya iskuxirayaashayda tixraaca halkaas), ma hubo sida aan ula tacaali lahaa emaylkayga. Sanebox waxay qabataa shaqo cajiib ah markay tahay barashada Emailkeyga oo ubaahan feejignaan deg deg ah MailButler-na waxay i siisaa fursad aan dib ugu dhigo jawaabaha, udiyaariso emaylka, kuna xoojiyo Apple Mail dhowr astaamo kale.
Labada barnaamijba waxay ka siman yihiin in sanduuqa sanduuqa lagu dhex maro faylalka dhexdooda. Kuma koobna kaliya Inbox, Junk Folder, iyo Trash mar dambe systems nidaamyadan ayaa fariimaha marinaya kana baxaya dhowr fayl oo kale. In kasta oo kuwani ay aalad waaweyn ii yihiin, haddana waa inay ku kacaan dhibaato xagga qiyaasta emayllada ee dirayaasha isku dayaya inay ila soo xiriiraan. Habdhaqanka emaylka is beddelaya, iyo qalabkani waa uun tusaale ka mid ah sida.
Si loo baaro isbeddelada hab-dhaqanka emaylka, ReachMail waxay dhowaan sahamisay 1000 qof si ay u bartaan waxa ay ka dhigan tahay maaraynta sanduuqyadooda. Qaar ka mid ah natiijooyinka muhiimka ah:
Emailka Subaxa - 71% dadka Mareykanka ah waxay hubiyaan markii ugu horeysay inta u dhaxeysa 5 subaxnimo iyo 9 subaxnimo New York iyo New Jersey celcelis ahaan jeeggii ugu horreeyay ee ugu horreeyay — waxyar ka hor 9-ka subaxnimo — iyo dadka ku nool Utah baaritaanka hore, ugu dambeyn 6:30 am, celcelis ahaan.
Email Fiidka - 30% Mareykanku waxay hubiyaan kahor 6-da fiidnimo iyo 70% wixii ka dambeeya 6-da fiidnimo 46% reer Virginians waxay fiiriyaan e-maylkooda waqtiga ugu dambeeya inta udhaxeysa 9-ka fiidnimo iyo saq-dhexe, halka 13% ka badan ay dhammeeyaan wixii ka dambeeya saqda dhexe. Ma aha in laga badiyo, 71% reer Tennesseans waa niman doqomo ah, oo hubinaya emaylkooda wixii ka dambeeya 9-ka fiidnimo, iyo kaliya 12% ayaa hubinaya ugu dambayn ka hor 6-da maqribnimo, oo aad uga hooseeya celceliska qaranka.
Diritaanka E-mayllada - Ku dhowaad kalabar dhammaan dadka Mareykanka (46%) waxay soo diraan in ka yar 10 emayl maalintii. 30% dadku waxay diraan 10 ilaa 25 emayl maalintii, 16% waxay diraan 25 ilaa 50, 8% waxay diraan in kabadan 50 emayl maalintii. Reer Galbeedku waxay leeyihiin celceliska ugu hooseeya ee emayllada la soo diro, maalintii 18. Woqooyi-bari ayaa ugu sarreeya gobollada oo dhan waxayna celcelis ahaan 22 dirtay emayl maalintii, halka Massachusetts ay leedahay heer sare oo 28 e-mayl ah oo la diro maalintii, celcelis ahaan.
Response Time - 58% dadka Mareykanku waxay yiraahdaan waxay uga jawaabaan emaylka hal saac gudahood. 26% waxay ku jawaabaan hal ilaa lix saacadood gudahood, 11% waxay ku jawaabaan lix ilaa 24 saacadood gudahood halka 5% ee soo hartayna ay ku jawaabaan 24 saac ka dib, celcelis ahaan. Gabdhaha Virginians waxay soo sheegaan jawaabaha e-maylka ugu dhaqsaha badan celceliska waqtiga jawaabta oo kaliya in kabadan laba saac Dadka reer New York, si layaab leh, waxay ugu socdaan si gaabis ah - 12% waxay dhahaan celcelis ahaan maalintii ama in ka badan si ay uga jawaabaan 33% waxay qaataan ugu yaraan lix saacadood.
Emails aan la aqrin In kabadan kala bar dadka Mareykanka waxay leeyihiin wax kayar 10 emayl oo aan la aqrin sanduuqa sanduuqa shaqadooda. 26% warbixin ayaa heysa wax ka yar 50 emayl oo aan la aqrin, 13% waxay leeyihiin in ka badan 100 emails oo aan la aqrin halka 6% ay leeyihiin inta udhaxeysa 50 iyo 100. South Carolina waxay soo sheegtaa emayllada aan la aqrin, celcelis ahaan waa 29, halka tiro aad u badan oo 30% ka mid ah dadka reer Tennesseans ay sheegeen in ka badan 100 emayl oo aan la aqrin. Midwest waxay leedahay kuwa ugu yar, celcelis ahaanna waa 17.
ReachMail waxay soo saartay macluumaadkan: Sanduuqa Mareykanka ee 2: Xisaabinta si loo muujiyo isbeddelada.
Tags: sanduuqa mareekankasanduuqa mareekanka ee 2emaylka u furwaqtiga jawaab celintaimisa emailsboosteejadagaadhsii boostadasanboxxisaabintaemayllada aan la aqrin